ह्याकरको निशानामा नेपाली वित्तीय संस्थाहरू, कति सुरक्षित बैंकहरूमा निक्षेप ? - Birgunj Sanjalह्याकरको निशानामा नेपाली वित्तीय संस्थाहरू, कति सुरक्षित बैंकहरूमा निक्षेप ? - Birgunj Sanjalह्याकरको निशानामा नेपाली वित्तीय संस्थाहरू, कति सुरक्षित बैंकहरूमा निक्षेप ? - Birgunj Sanjal
१० श्रावण २०७८, आईतवार १०:०७
वीरगन्ज । बैकिङ क्षेत्रमा एकपछि अर्को ह्याकिङका घटना बढेपछि निक्षेपकर्ता सशंकित हुन थालेका छन् । सम्बन्धित निकायले सिस्टम सुरक्षित भएको बताइरहे पनि पटकपटक ह्याकरको निशानामा पर्दा निक्षेपकर्ता ढुक्क हुन नसकेका हुन् । आफूले दुःख गरेर जोगाएको रकम सुरक्षित राख्नका लागि बैंंकलाई जिम्मा दिँदा गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने पिरलो निक्षेपकर्ताहरूमा बढ्न थालेको छ ।